Guangzhou Ontime - Guangzhou Ontime International lọjistik Co., Ltd.
Guangzhou Ontime International Logistics Co., Ltd. (nke a na-akpọ GZ Ontime) nke dị na Baiyun District, Guangzhou. Anyị bụ ndị nnọchi anya maka DHL, gbasie, TNT, FedEx, Amazon pụrụ iche edoghi (Kpọmkwem ụgbọ mmiri ka FBA), oké osimiri ibu, ikuku inwego, ụgbọ okporo ígwè njem na gwongworo. Companylọ ọrụ anyị na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke "onye ahịa mbụ, buru ụzọ" na ụkpụrụ nke "onye ahịa mbụ" iji nye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma. Nnọọ ịjụ maka nkwupụta!
GZ Ontime Logistics bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mba ọzọ na-arụ ọrụ afọ 10 nwere ahụmịhe afọ 10 na mpaghara mbupu mba ụwa. GZ Oge nwere ike ịnye ọrụ dị ka n'okpuru: ibubata na mbupụ ngwongwo nke onwe, mbubata ibu na mbupụ ndị na-ebu ibu, mbupụ akụrụngwa buru ibu, na-egosipụta ụgbọ njem, ụlọ nkwakọba ihe na nchekwa ọdịnala.
Gbaso ọrụ echiche nke nchekwa, ọsọ, izi ezi na aku na uba, anyị na-enye ndị ahịa na mba na anụ ụlọ ikuku njem, ọkọlọtọ awara awara (FEDEX, DHL, gbasie, TNT, EMS), ala njem, ụgbọ mmiri njem ọrụ, anyị nwekwara ike inye ndị ụgbọ njem pụrụ iche na Hong Kong, Macao, na Taiwan.
Companylọ ọrụ anyị nwere mmekọrịta dị ogologo oge na ndị nwe ụgbọ mmiri dịka apl msk cscl.
Ikike ikuku nwere uru nke ụgbọ elu na ọrụ awara awara. Anyị nwere ike ịnabata ọrụ ụgbọ mmiri na ikuku site na ụwa niile.
Companylọ ọrụ ahụ dabere na guangzhou ma dabere na osimiri delta delta, guangdong, radieshon gafee mba ahụ, ya na ndị mmekọ ogologo oge na be Beijing, shanghai, tianjin, qinghai, dalian na obodo ndị ọzọ.
N'otu oge ahụ, e guzobewo netwọk na-ebufe ngwa ahịa zuru ụwa ọnụ zuru oke, nke nwere ike inye ndị ahịa ọtụtụ ọrụ ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ gburugburu ụwa. Anyị bụ ndị obodo. Anyị zuru ụwa ọnụ. Anyị nọ ebe niile ịchọrọ ma chọọ.
Anyị maara ụzọ gasị, nhọrọ, ọnụego, ụgwọ na ụzọ kacha mma iji ụgbọ mmiri ibu.
Ka anyị wulitere gị ọnọdụ arụ ọrụ zuru oke nke ga-eme ka ị na-azụ ahịa ogologo oge. Mbupu gị ga-abata n'enweghị nsogbu na n'oge ma ga-azọpụta gị ụgwọ ogologo oge.